Apetaho ny takelaka ao amin'ny AutoCAD, izay havaozina haingana
Na dia azontsika atao aza ny milaza izany, dia manondro fa ny Office Importer dia fitaovana iray ahafahana mampifandray takelaka Excel na rakitra Word iray ary havaozina miaraka amin'ny famolavolana ilay rakitra tany am-boalohany, ny tantara satria ny kaonty Brendan Haggerty no endriko ...
dwg Office for mahafaty
AutoCAD 2016. Faran'ny fahazoan-dalana mandrakizay.
Amin'ny maha fironana voajanahary an'ity vanim-potoana fivoarana an'izao tontolo izao, mifandray, ary saika tsy ampoizina, ny rindrambaiko dia tsy vokatra vita anaty boaty intsony ary lasa serivisy. Ny AutoDesk dia tsy misy an'io manko izay efa hitantsika miaraka amin'ny Adobe, Bentley Systems, Corel, mba hanonona vitsivitsy. Nanambara i AutoDesk fa amin'ity taona 2015 ity no ho farany ...
Faly izahay manamarika fa nampidirina ny dika voalohan'ny Spatial Manager for BricsCAD, ka ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny GIS routines amin'ny vidin'ny CAD.
AutoCAD-Autodesk, jeospatial - GIS, Pirinty voalohany
Endrika hamoronana rakitra DXF avy any Excel lisitry ny hevitra
Vao tsy ela akory izay i Juan Manuel Anguita no nanome ahy ny kinova vaovao an'ity fampiharana izay efa nampiroborobo antsika teo aloha ity, saingy io fotoana io dia namela olana vitsivitsy tamin'ny kinova Excel vaovao. Ny fampiasana azy dia tena tsotra, fa tena miasa. Mila mampiditra teboka maromaro ianao, mandrindra x, y, z; Napetrako ...
Bentley ProjectWise, zavatra voalohany fantatry ny rehetra
Ny vokatra Bentley fanta-daza indrindra dia ny Microstation, ary ny kinova mijidina ho an'ny sampana geo-injeniera samihafa miaraka amin'ny fanamafisana ny famolavolana ho an'ny injeniera sivily, indostrialy, maritrano ary fitaterana. ProjectWise no vokatra Bentley faharoa izay manambatra ny fitantanana ny fampahalalana sy ny fampidirana ekipa miasa; ary vao navotsotra ...
Bentley Systems DGN dwg I-modely
Engineering, Microstation-Bentley, Pirinty voalohany
Inona ny New in AutoCAD, ArcGIS sy Global Mapper
ArcGIS Plugin ho an'ny AutoCAD ESRI dia namoaka fitaovana iray hijerena sary an-tsaina ny angona ArcGIS avy amin'ny AutoCAD, izay mihantona ho takelaka vaovao eo amin'ny Ribbon ary tsy ilaina ny fahazoan-dàlana ArcGIS na ny programa napetraka. Izy io dia miasa miaraka amin'ny kinova AutoCAD 2010 ka hatramin'ny AutoCAD 2012, tsy nilaza na inona na inona momba ny AutoCAD ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-Autodesk, fanavaozana
Hanova ny DGN rakitra ED50 ho ETRS89
Ny mpampiasa GIS dia matetika no fanamby hanova ny angona CAD sy ny rafitra fanovozan-kevitra. Lazainay fa fanamby satria, amin'ny tranga maro, io fanovana io dia mitaky asa be izay mamela antsika hitahiry fampahalalana betsaka araka izay azo atao amin'ny angon-drakitra voalohany. Mahaliana fa ity fampiasa ity dia miaraka amin'ny Microstation, saingy azo antoka ho an'ireo ...
AutoCAD 3D Mazava ho azy fa any am-baravarana, fa $ 34.99
Ity ny làlana fitarihana avy hatrany, izay azo vidiana sy raisina eo am-baravaran'ny trano amin'ny vidiny $ 34.99. Ny vokatra dia misy: Mazava ho azy fa ny AutoCAD 2D sy 3D misy horonan-tsary 477 Browser notsorina mba hijerena lohahevitra Ny rakitra ohatra rehetra dia mampiditra sary 17,000 dwg ...
Mianara AutoCAD mijery
Androany dia misy fampianarana AutoCAD maimaim-poana marobe amin'ny Internet, noho izany dia tsy mikasa ny hanao tahaka ny ezaka efa nataon'ny olon-kafa izahay, fa kosa mba hameno ny anjara birikiny izay manome ny sakana eo anelanelan'ny làlana izay manazava ny baiko rehetra sy ny zava-misy momba ny mpampiasa izay nahalala. tsy fantatra izay didy hanombohana. ...
AutoCAD-Autodesk, Fampianarana CAD / GIS, Video
Vaovao avy amin'ny 2 ao amin'ny faritra misy ny geospatial izay tsy azonao omena
Ny taona dia natomboka tamin'ny herin'ny orinasa natokana ho an'ny sehatry ny fiofanana, manararaotra an'ity lahatsoratra ity izahay hampiroboroboana ny fanavaozana misy amin'ity lohahevitra ity, ary indraindray dia manome fitohizan'ny vokatra iray izahay, izay niresahany hatramin'ny taona lasa; izay tsy manam-paharoa amin'ny hevitray ...
Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS, fanavaozana
Ahoana ny famoronana sakana amin'ny mikrosta (sela)
Amin'ny Microstation, ny sela dia antsoina hoe sela (sela) na dia misy aza ny toe-javatra sasany henoko fa antsoina koa hoe sela izy ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana azy sy ny lojika izay mampiavaka azy ireo amin'ny sakana AutoCAD. 1. Inona no ilana sela? Tsy toy ny GIS, izay mavitrika ny symbology avy amin'ny ...